FBC - Oromiyaatti proojaktoonni bishaanii 50 waggaa dura xumuramanis, rakkoo elektirikaarraa tajaajila hin eegalle
Oromiyaatti proojaktoonni bishaanii 50 waggaa dura xumuramanis, rakkoo elektirikaarraa tajaajila hin eegalle
Finfinnee, Bitootessa 12,2010(FBC)- Naannoo Oromiyaatti proojaktoonni bishaanii 50 ijaarsi isaanii ega xumuramere waggaa darbanis, rakkoo dhiyeessii elektirikaarraa kan ka’e tajaajila laachuu hin eegalle.
Proojaktoonni kanneen silaa namoota kuma 500 fayyadamoo taasisuuf ijaarraman.
Biiron Bishaan, Albuudaa fi Inarjii Oromiyaa dhiyeessii elektirikaa fi traanisfoormaraaf Tajaajila Elektiriikaa Ityoophiyaaf kaffaltii raawwateera.
Tajaajilli Elektiriikaa Ityoophiyaa Faanaa Broodkaastiing Koorporeetitti akka himetti, proojaktoonni bishaanii kanneen tajaajila laachuu akka eegalaniif amma Waxabajjii 2010tti tiraanisfoormarri ni dhaabbataaf jedha.
Proojaktoota bishaan dhugaatii kanneen jalatti, boolla 400tti siqanitti bishaan ga’aan argameera.
Biiroo Bishaan, Albuudaa fi Inarjii Oromiyaatti daayreektarri bulchiinsa koontiraataa fi koonistiraakshinii obbo Gurmeessaa Oljiraan akka himanitti, proojaktoonni bishaanii kanneen godinaalee fi aanaalee Shawaa lixaa,, Arsii lixaa, Gujii, Asgorii, Walisoo, Gundoo Masqal, Shawaa bahaa fi magaalota kaanitti ijaarramanii xumuramaniiru.
Tajaajila Elektiriikaa Ityoophiyaatti hoji gaggeessan diistiriibyuushinii obbo Masfin Birihaanen akka jedhanitti, hanqina oomisha waayar koondaaktaraa malee rakkoon hanqina tiraanisfoormaraa akka hin jiraatin kaasu.
Haata’uutii naannichi tiraanisfoormaraaf kaffaltii Birrii miiliyoona 8.5 ega raawwatee waggaa 1 ol darbeera.
Tajaajilichi akka jedhutti proojaktoota bishaanii qofaaf gaaffiin humna elektiriikaa 200 ol dhiyaatera.
Haata’uutii duursi laatamuu kan qabuuf duursa laachaa hojjechaa jirra jedhan.
Yeroo ammaa lammiilee naannoo Somaalee Ityoophiyaatii buqqa’anii qubachaa jiraniif bishaan diriirfamaa kan jiru yammuu ta’u, proojaktoota naannichaa shantammaniifis humna elektiriikaa dhiyeessuun murtaa’era.
Proojaktoota kanneenif amma Waxabajjiitti traanisfoormara dhaabufiin, gara hojiitti akka galan ni taasifamas jedhameera.
Proojaktoota bishaanii xumuramanii tajaajila laachuu hin jalqabin shantamman kanneenin ala, Birrii biiliyoona 1n kan ijaarraman humna boba’aan tajajaila akka laatan taasifameera.
Bara baajataa kanatti proojaktoonni bishaanii tajaajila laachuu eegalan 12.
Isaanis Shawaa kaabaa, Wallagga lixaa, Horroo Guduruu Wallaggaa, Arsii lixaa fi magaalaa Baatuutti argamu.
Biiron Bishaan, Albuudaa fi Inarjii Oromiyaa Faanaa Broodkaastiing Koorporeetitti akka himetti naannichatti proojaktoonni bishaan dhugaatii 25 hojjetamaa jiru.
Proojaktoonni kanneen sadarkaa godinaatti ijaarramaa kan jiran yammuu ta’u, xumuruuf hojjetamaa jiraachuun himameera.
Oduuwwan Biroo « Lakkoofsa lammiilee Mooyyaaledhaa buqqa’an dabaluun bu’aa argachuuf carrraaqqamaa jira- ambaasaaddar Diinaa	Walga’iin Mana Maree ADWUI akkuma itti fufetti jira »